Shiinaha Springworks waxay ku dari doontaa 500,000 cagood oo laba jibbaaran warshad -koriyo beeraha hydroponic iyo alaab -qeybiyeyaasha | Aixiang
Lisbon, Maine - Springworks, oo ah beer -biyoodka ugu weyn uguna horreeya ee la xaqiijiyay ee New England, ayaa maanta ku dhawaaqday qorsheyaal lagu kordhinayo 500,000 cagood oo laba jibbaaran oo ah meel lagu koriyo.
Ballaarinta baaxadda leh ayaa sii wadi doonta u adeegidda macaamiisha ugu weyn ee Beeraha Maine, Supermarket-ka Cuntada oo dhan iyo Hannaford Supermarket, iyo sidoo kale maqaayado badan oo maxalli ah, dukaamo iyo dukaamo kale. Warshadahani waxay siin doonaan Springworks salaar dabiici ah oo cusub.
40,000 cagood ee cagaaran ee ugu horreeya ayaa la adeegsan doonaa bisha Maajo 2021, taas oo saddex jibaarmi doonta soosaarka sannadlaha ah ee shirkadda Bibb, salad romaine, salaar, labiska salad iyo alaabo kale, iyo kumanaan rodol oo tilapia ah. , Taas oo muhiim u ah geeddi -socodka koritaanka Springworks ee biyo -mareennada.
Aasaasaha Springworks, oo ah 26-jir Trevor Kenkel, ayaa aasaasay beerta sanadkii 2014 isagoo jira 19 sano, wuxuuna u nisbeeyay inta badan kororka maanta amarrada kordhay ee ka yimid suuqyada waaweyn si looga jawaabo COVID-19.
Faafida ayaa waxyeello badan u geysatay dukaamada raashinka iyo kuwa iibsada ee taageera iyaga. Dib -u -dhaca maraakiibta ee alaab -qeybiyeyaasha Xeebta Galbeed ayaa ku qasbaya iibsadayaasha dukaamada waaweyn inay raadsadaan ilaha maxalliga ah iyo kuwa gobollada si ay u helaan noocyo kala duwan oo ammaan ah, nafaqo leh oo waara. Xilliga Springworks, hab-u-dhiska noolaha-deegaanka ayaa bixiya adeegyo dhinac walba ah. Habkani wuxuu adeegsadaa 90% biyo ka yar hababka kale, ma isticmaalo cayayaanka sunta ah, waxayna noo oggolaanaysaa inaan soo saarno khudaar cagaaran oo macaan leh sannadka oo dhan. Iyo kalluunka. "Ayuu yiri Kenkel.
Markii masiibada ay caan ku noqotay 2020, Cuntada oo dhan waxay soo iibsatay Springworks si ay u kaydiso/u dhigto alaabta salaar dabacsan si ay u daboosho baahida weyn ee salaar organic ah ee macaamiisha Waqooyi -bari. Dukaamo badan oo raashinka lagu iibiyo ayaa la kulmay xasillooni-darrada alaab-qeybiyeyaasha Xeebta Galbeed sababtuna tahay dib-u-dhaca maraakiibta iyo arrimaha kale ee bixinta iyo gaarsiinta xadka.
Hannaford waxay ballaarisay qaybinta salaar -gacmeedyada Springworks ee New England ilaa dukaamada ku yaal aagga New York. Hannaford wuxuu bilaabay dhoofinta salaar Springworks dhowr dukaan oo ku yaal Maine sanadkii 2017, markii silsiladdu ay raadineysay bedelka salaar ee maxalliga ah ee California, Arizona iyo Mexico.
Laba sano gudahood, adeegga Springworks iyo tayada Hannaford waxay dhiirrigelisay inay ballaariso qaybinta dhammaan bakhaarrada Maine. Intaa waxaa sii dheer, markii masiibada hargabka iyo baahida macaamiisha ay sare u kacday, Hannaford waxay ku dartay Springworks dukaankeeda New York.
Mark Jewell, maamulaha qaybta wax soo saarka beeraha ee Hannaford, ayaa yiri: “Hawlaha gu’gu waxay si taxaddar leh u eegi doonaan sanduuq kasta marka la buuxinayo baahiyaha sahayda saladhka iyo in la gaaro wasakhda cuntada eber. Anagoo ka bilaabanayna hab-u-dhigistiisa kalluunka-khudradda, waxaan ku kori doonnaa wax-soo-saar cusub oo nafaqo leh oo nafaqo leh. ” Arrimahan, oo ay weheliyaan dhaqamadooda badbaadada cuntada ee aadka u wanaagsan, helitaanka sannadka oo dhan iyo u dhowaanshaha xaruntayada qaybinta, ayaa naga dhigay inaan dooranno Hawl-gallada Halkii aan ka dooran lahayn badeecadaha beer-soo-saarka ah ee la geeyo dalka oo dhan, way fududahay. ”
Marka lagu daro alaabooyinka ay ka mid yihiin Springworks 'Organic Baby Green Romaine lettuce, Hannaford ayaa sidoo kale ku beddeshay salaar caleen cagaaran oo dabiici ah oo leh astaanta Springworks, kaas oo soo saari kara qaddarka saxda ah ee salaar caleen ah oo loogu talagalay hal salad ama macaan.
Kenkel iyo madaxweyne ku xigeenka walaashiis Sierra Kenkel ayaa jiray ilaa bilowgii. Wuxuu baaray oo soo saaray noocyo cusub oo dabooli doona baahiyaha ganacsi ee tafaariiqleyaasha oo dabooli doona hab -nololeedka iyo baahiyaha nafaqada ee macaamiisha.
"Macaamiisha qiimeeya tayada iyo hufnaanta waxay weydiinayaan dukaamada waaweyn alaabada dabiiciga ah soo -saarayaasha cuntada maxalliga ah," ayuu yiri Sierra, oo mas'uul ka ah iibinta iyo suuq -geynta Springworks.
"Laga soo bilaabo abuurka ilaa iibinta, waxaan si aad ah uga shaqeyneynaa sidii aan u siin lahayn salaar -ka ugu macaan uguna macaan badan ee dukaamada sida Cuntada oo dhan iyo Hannaford ay filayaan, iyo waxa ay macaamiishooda u qalmaan. aqalka dhirta lagu koriyo ee cusub wuxuu sii kordhin doonaa awoodda aan u leenahay inaan ku beero dhadhan macaan, nafaqo leh, iyo salaar organic ah oo la xaqiijiyay-iyo xuquuqda sanadka oo dhan si loogu shaqeeyo khudaarta cagaaran ee khaaska ah iyo geedaha mustaqbalka. Maine. "
Springworks waxaa la asaasay 2014 agaasimaha guud Trevor Kenkel markii uu jiray 19 sano oo kaliya. Wuxuu ahaa warshad -koriyo -koriyo -biyood -biyood oo ku yaal Lisbon, Maine, oo soo saarta salaar dabiici ah iyo tilapia sannadka oo dhan. Calaamadaha Kalluunka-khudradda waa nooc ka mid ah beeraha oo dhiirrigeliya xiriirka isku-dhafka ah ee u dhexeeya dhirta iyo kalluunka. Marka la barbardhigo beeraha ku salaysan ciidda, nidaamka biyo-mareenka Springworks wuxuu isticmaalaa 90-95% biyo ka yar, nidaamka lahaanshaha shirkadu wuxuu leeyahay wax-soo-saar halkii hektar oo 20 jeer ka sarreeya beeraha dhaqanka.
Calaamadaha kalluunka iyo khudradda waa farsamo taran oo kalluunka iyo dhirtu ay midba midka kale ku taageeraan koritaankooda nidaam xiran. Biyaha hodanka ku ah nafaqada ee laga helo beerashada kalluunka ayaa lagu shubaa sariirta koritaanka si ay u quudiso dhirta. Dhirtaasi markeeda waxay nadiifiyaan biyaha ka dibna waxay ku celiyaan kalluunka. Si ka duwan nidaamyada kale (oo ay ku jiraan hydroponics), kiimikooyin looma baahna. In kasta oo ay jiraan faa'iidooyin badan oo hydroponics ah, haddana waxaa jira dhowr koriyo oo biyo -mareen ah oo ganacsi ku leh Mareykanka.
Waqtiga dhejinta: Apr-20-2021